April 2020 - Samawadenews
Xildhibaan Daahir Jeesow oo soo dhaweeyey hadalka RW Somalia Xasan Khayre.
Xaaskii Askarigii dilay Ninka madowga ah oo soo afjaraysa noloshii ay la wadaagaysay.
Xildhibaan Indho oo u jawaabay Faysal C. Waraabe
United States: Wararkii ugu dambeeyey iyo rabshadaha ka socda Maraykanka iyo Aqalka Cad oo muddo gaaban la xidhay.
RW DFS Xasan Khayre ayaa sheegay in Doorashadu dhacayso wakhtigeeda.
Cisbitaalka Borama oo si ku meel gaadh ah loogu wareejiyey Gaadhi Ambulance ah.
War murtiyiin ka soo baxay Guddiga Dhexdhaxaadinta Shaqaaqo ka dhacday Garbo.
Madaxweyne Maxamed Waare oo Guddi u saaray dhakhaatiir lagu dilay Galoleey.
C/raxmaan Cadami: Hubka Masar ay siisay Somalia; “Maya dacwad meesha kuma jirto, laakiin cabasho waa laga samayn karaa”
Shirkadda Twitterka oo qarisay in la arko Fariin u diray Madaxweyne Trump sababna uga dhigay inay xiisad kicinayso.
Cali Cantar: “Faysal C. Waraabe haddii uu sidan u hadlayo waxa haboon in laga qaado Guddoomiyanimada, reero dhan ayuu iska caayayaa”
Wasiirka Caafimaadka oo ka warbixinaysa xanuunka covid-19 ee Soomaaliya.
Marwada Gudd. Xisbiga Waddani ee G. Awdal oo ka warrantay sida ay wax u dhaceen xalay iyo xadhiga.
Maamulka Berbera oo ka hadlay koronto la’aanta ka jirta magaalada.
Gudd. Xisbiga Waddani ee G. Awdal Maxamed Suldaan oo xalay gurigiisa lagala baxay, laguna tuuray Xabsiga. “G. Awdal wuxuu noqday marinkii Qasa”
S.land oo ka hadashay Xoolihii ugu horeeyey ee laga dhoofiyo Dekeda Berbera intii Sucuudigu furay.
Wasiirka Gargaarka Soomaaliya oo ka hadlay Fatahaada Webiga Jubba.
Dowladda FS oo 1 malyan ugu Deeqday Magaalada Qardho.
Xisbiga Waddani oo mar kale ka digay colaada Gobolka Sanaag.
Olole lagu banaynayo meelihii biyuhu xidheen oo Qardho ka bilaabmay.
Shacabka Beledweyn oo bilaabay gurmadka Walaalaha Magaalada Qardho.
Mudaharaadyo ka socda maalintii 2aad Dalka Lubnaan iyo Dhaqaalaha oo hoos u dhacay.
Muqdisho. 54 Qof oo cusub oo laga helay Xanuunka Covid-19.
Dowladda Federalka oo Deeq Caafimaad gaadhsiisay Maamulka Hirshabeelle.
Madaxweyne Puntland oo dalacsiiyey askartii ka qaybqaadatay Gurmadka Qardho.
Dowladda FS. oo Guddi u magacawday Daadadka ka dhacay Qardho.
Cali M. Geedi oo ka hadlay Bandowga Muqdisho “inaan la Siyaasadayn khatarta cudurkan ku hayo dalkeena iyo in dadka lagu kiciyo”
Axmed Madoobe iyo Xidig oo ku laabtay Magaalada Kismaayo.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka DFS ayaa ka hadlay xaalada Magaalada Qardho.
Maamulka Degmada Boosaaso oo ku Baaqay in loo gurmado Magaalada Qardho.
Saaxil: Madax dhaqameed sheegay inay Taageeradii kala noqdeen Xisbiga Kulmiye.
Roobab lixaad leh oo ka da’ay magaalada Gaalkacyo.
Wasiirka Caafimaadka DFS oo ka warbixisay xanuunka Caabuqa iyo dadka qaba oo kor u dhaafay 500.
Madaxweyne Siciid Deni oo socdaal degdeg ah ku tegay Magaalada Qardho.
Maamulka Gobolka Awdal oo Gubay Shixnado Qaad ah.
Marwadii Madaxweyne Maxamed I. Cigaal: “S.land bakhtiyaanasiibkii ay codka ku gashay way ku khasaartay”
Maamulaha Cusub ee Kastamka Berbera oo xilkii la wareegay.
Suuqyada Boosaaso oo kor u kac uu ku yimid maciishada.
Libya: General Khalifa Xaftar oo ku dhawaaqay inuu dhisayo Maamul Dowladeed.
W. Caafimaadka S.land oo faahfaahin ka bixisay Xaalada Coronaviruska.
Ka Qaybqaado Dhismaha Masjidka Quba ee Siinaay – Muqdisho.
Ciidamada Booliska Gobolka Sool oo qabtay Qaad si sharci darro ah loo soo geliyey.
Tirada Covid-19 Soomaaliya oo korodhay iyo Digniino cusub.
Madaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday Taliyihii Booliska, magacaabayna Taliye cusub.
Boqortooyada Sucuudiga oo joojisay xukunada dilka ah ee lagu fulin jiray dadka da’da yar.
Xildhibaanada Hirshabeelle oo Mooshino iska soo horjeeda ka keenay Madaxweynaha iyo Gudd. Baarlamanka HirShabeelle
Ismaaciil Buubaa: “Arrintii hore u jirtay ee sidaasaanu goosanay oo wax ka soo noqonaya majiro, arrin shaqaynaysa ma’aha”
Qaadkii ugu badnaa oo S.land lagu gubay iyo Gaadiid lala wareegay.
Xulafada uu Hogaaminayo Sucuudigu oo ka soo horjeesatay Gooni isutaaga Koonfurta Yemen.
Xaalada caafimaad ee Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong Un oo Qaliin wadnaha ah galay.
Garoowe: Hooyooyin ka ganacsan jiray Jaadka oo xukuumada weydiistay bedelkiis.
Hooyooyin Dan yar ah oo cabasho la hortagay madaxtooyada S.land
Sh. Maxamed Umal: Nafta oo la nadiifiyo Bisha Ramadaan.
Alshabaab oo Hoobiyaal ku garaacday Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.
Puntland oo sheegtay in 5 Qof oo cusub laga helay Coronavirus.
Muxaadaro: Ramadaanka, Sheekh Xuseen Cali.
Koonfurta Yemen oo ku dhawaaqday ismaamul cusub oo lagu magacaabo ITIQAALI (S.Transitional Council), kana madax banaan Woqooyiga Yemen.
Xukuumada S.land oo la wareegtay Gaadhi iyo Qaadkii saarnaa.
Muqdisho. Ciidanka Booliska DFS oo qabtay Rag hubaysan oo ku dhex dhuumanayey Dibad-baxayaal.
Wasiirka Maaliyada Dr. C/raxmaan Beyle oo ka jawaabay sababta ay Dowladdu u bixin la’dahay lacagihii 1 milyan ahaa.
Mineapolis, Minnesota markii ugu horeysay Adinka masaajidka laga maqlo.
Sudan: Hogamiyihii hore ee dalka Sudan Cumar Al-Bashir oo lagu xukumay 2 sanno oo xadhig ah. Daawo
Xariir Jaamac oo u jawaabay Buurmaddow: “Hadalka Buurmaddow waa hadal Daciif ah oo laga yaqyaqsoodo, Labada Askari ee dalka maamula lama yaabani, waxan la yaabanahay labada Gole ee u jiibinaya ee wakhtigoodii dhamaaday” Daawo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay Shir Madaxeedka Ruushka iyo Afrika ayaa soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee haatan horyaalla labada dhinac. Madaxweynaha … Read More
Sunrise 3:46 AM
Magrib 8:10 PM
[Luqman (Luqman): 10]